Yimiphi imibuzo ehlala ibuzwa rhoqo kwiinjini?
Imibuzo ye-injini yosesho okanye imibuzo yimizwi okanye amabinzana abasebenzisi abathintekayo bahlobo kwibhokisi lokukhangela ukuze bafumane ezifanelekileyo kwiziphumo zabo zophando. Imibuzo yokukhangela ingabelana ngezigaba ezintathu eziphambili - ukuhamba ngeendlela, ulwazi kunye nokuthengiselana. Olu hlobo lwemibuzo lusenza sikwazi ukuqonda indlela abahamba ngayo yokufuna iimfuno zabathengi kunye neenjongo zabo. Makhe sijonge ngakumbi kule ndlela yeenjini ze-injini yokusesha.
uhlobo lombuzo xa umsebenzisi esazi uhlobo luni lomthombo angathanda ukukufumana. Uvele ufake i-URL ethize yewebhu kwibhokisi lokukhangela kwaye ufumana umphumo ochaphazelekayo - multi stage ejector. Imibuzo efanelekileyo yokuhamba ngeenkcukacha inomnqophiso ocacileyo kwaye ukuba indawo yakho ayikho engqondweni yomsebenzisi, indawo yakho ayiyi kubonwa.
Kungaba kunzima ukwenza isicwangciso kunye nale hlobo lombuzo. Nangona kunjalo, ukuba ugxininisa ekuphuculeni ukuqashelwa kweentengiso zakho, uyaziphindaphinda amathuba akho. Umyinge wesibalo seziphumo ezibonakala kwikhasi lokuqala leGoogle SERP xa kuziwa kumbuzo wokuhamba ngokuziisixhenxe. I-Google ithathe le nyathelo njengoko kubonakala kungenalusizo ukubonisa iziphumo ezingaphezulu kwe sixhenxe ukuba abasebenzisi kwiimeko ezininzi bafumana umhlaba kwi-TOP result one. Nangona kunjalo, ezinye iimbuzo ezibonakalayo zihamba ngeendlela ezingenakulu hlobo. Ngokomzekelo, akubona bonke abasebenzisi abafuna "i-Instagram" umbuzo kufuneka bafumane le app multimedia. Abanye babo bangathanda ukufunda amanqaku athile axhatshaziweyo okanye ulwazi oluthile malunga nezicwangciso ze-Instagram okanye izibuyekezo. Yingakho kufuneka uqiniseke ukuba unombuzo ochaphazelekayo wokuhamba ngeendlela ovela kuzo zombini iziphumo ezihlawulwayo.
Umbuzo wolwazi xa umsebenzisi efuna ukufumana impendulo yombuzo wakhe okanye ukulungisa ingxaki ethile. Akunandaba nawuphi uhlobo lwesayithi awayejamelana nalo. Kukho imfuneko kuphela yokuba lo mthombo wewebhu uza kusebenza ngokufanelekileyo kumbuzo wakhe. Umbuzo wolwazi ulwabalala ngokubanzi kwaye lusetyenziswa ngokubanzi ngabasebenzisi abasebenzisi. Injongo ephambili yokukhangela injini yokukhangela ukukhangela abasebenzisi abafuna umxholo othile mgangatho ngoncedo lwemibuzo yolwazi. Ukuba unomxholo oyingqamene kwaye unxulumene ne-SEO onokukunceda abasebenzisi ukuba basombulule iingxaki zabo, ngoko mhlawumbi i-website yakho iya kufumana i-traffic ephezulu enokuguqula ukuthengisa. Kunzima ukufumana inzuzo kwimibandela yolwazi njengezikhundla zokuqala ze-SERP, kulo mzekelo, zivame ukufikelela kwiimpendulo zeGrazil Ulwazi kunye ne-Wikipedia. Nangona kunjalo, abaninzi abasebenzisi bangathanda ukufumana ulwazi olunzulu malunga nesihloko. Yithuba lakho lokuphakamisa i-click-rate-rate rate kunye nokuguqulwa. Ukuqhuba umzila kwiphepha lakho lewebhu, ungasebenzisa izithuba zeblogi ngolwazi oluphezulu kunye neengcebiso. Ngaphezu koko, kulungile ukuba ubhale iinkcukacha ngokulandelelana ngeendlela kunye nokuyila iividiyo ezichazayo.
Umbuzo othe xa uthengisa umsebenzisi angathanda ukuthenga. Kuzwakala ngathi "ukuthenga into" okanye "ukulungisa into. "Ngaphezu koko, imibuzo enokubambisana ingabandakanya amagama asemthethweni njenge" Apple devices "okanye" i-smartphones ze-Samsung. Uphando oluninzi lweendawo ezifana ne "Indawo yokudlela yaseAsia e kufuphi neCichic" inokuthengiselana. Umbuzo othengiselanayo unenzuzo enkulu ekufumaneni umbuzo owenza abathengisi be-intanethi bafumane imali kwi-intanethi. Ukuze ufumane i-ROI ephezulu, abanikazi bewebhu babhekisela ekusebenziseni injini yokukhangela kunye nokuhlawula ngokukhawuleza.